I-Ultrasonic Nano-Emulsation ye-Microencapsulation ngaphambi kokufaka i-Spray-Drying - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuze i-microencapsulate izithako ezisebenzayo nge-dryer-drying, i-Micro-or-nanoemulsion ehle kakhulu ifakwe kahle.
I-ultrasonic emulsification iyinqubo elula futhi enokwethenjelwa yokukhiqiza ezinzile ezincane- nano-emulsions
Njengomunye umuntu osebenza nge-surfactant, ama-biopolymers njenge-gum arabi noma i-WPI angasetshenziswa ezinqubo ze-ultrasonic emulsification njengezigaba zokudla ezingeni lokudla.
I-emulsions kanye nekhwalithi ye-emulsion idlala indima ebalulekile mayelana nokusebenza kahle nokuzinza kwama-microparticles ezinamafutha olungiselelwe ngezinqubo ze-encapsulation njenge-dry spray. Ukusimama kwe-emulsion, i-viscosity, usayizi we-droplet kanye ne-oyela / amanzi isilinganiso yizinto ezibalulekile. Ngesikhathi sokucubungula, okuqala ngokulungiswa kwe-emulsion bese iphetha ngokumiswa kwe-spray, zonke lezo zakhiwo zomzimba nezamakhemikhali kufanele zigcinwe, ukuze kuvikelwe ukuwohloka kwamagciwane. Ikhwalithi ye-microencapsulation ne-emulsions stability ihlobene kakhulu futhi ithonya ikhwalithi yemikhiqizo epholile yokugcina ekugcineni kakhulu. Ngakho-ke, inqubo ethembekile ye-emulsification iyadingeka. I-ultrasonic emulsification ubuchwepheshe obusungulwe kahle, esetshenziselwa ezimbonini ezihlukahlukene emhlabeni wonke ukukhiqiza ama-macro-, nano-, kanye namancane-emulsions.
Ama-ultrasonicators asebenza kahle ahlelwe kahle emisebenzini ye-emulsification embonini yokudla, i-pharma kanye ne-cosmetic. Ukusetshenziswa kwamagagasi amakhulu e-ultrasound kuyindlela ephumelelayo yokukhiqiza imulsion ngamaconsi amancane amancane. I-ultrasonic emulsification isekelwe kumgomo we-cavitation, lapho amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasound kanye ne-high velocity liquid jets ukugcoba amaconsi’ ebusweni, ekwakheni ngaleyo ndlela amaconsi amancane kanye nokuthutha okumile.
Ama-emulsions e-ultrasonic angagxiliswa ngokusebenzisa ama-agent e-emulsifying avamile (isib. I-polysorbate, i-sorbitan njll), kodwa futhi asebenzisa ama-biopolymers (isb. Guar gum, i-gum arabic, iWPI njll). Izimboni ziye zaqaphela amandla amakhulu ama-biopolymers njenge-emulsion stabilizers. Ikakhulukazi ekudleni, emulsions yezokwelapha nezimonyo, ama-biopolymers avumela ukuthuthukiswa kwemikhiqizo “ihlanzekile” ilebula. Ama-biopolymers kanye ne-biopolymer complexes atholakalayo emigqumeni enkulu kanye nekhwalithi yebanga lokudla. Izakhiwo ze-biopolymer (ezifana ne-polysaccharide-protein complexes) ziphakeme kunama-biopolymers njengoba zinikeza izakhiwo ezithuthukisiwe kunamapolyli ngamunye. I-biopolymer eyakhiwe amaprotheni kanye ne-polysaccharide (= ama-polymers ama-carbohydrate ahlukene) inikeza izinzuzo ze-molecule ngayinye. Iprotheyini ikwandisa umsebenzi wendawo ukuze kutholakale ukugcwala okuphezulu okuphezulu komhlaba okutholakala. I-polysaccharide eyinkimbinkimbi inciphisa ukungezwani kokuxhumana futhi ngaleyo ndlela amandla okudingeka ukuba akhiqize izindawo ezintsha. Ngaleyo ndlela, i-polysaccharides ithuthukisa ukwakheka kwamaconsi amancane. I-biopolymer complex ihlinzeka ngokusemandleni kokubili kokubili futhi yenza kanjalo kube nokuqiniswa okuqinile.
Amaprosesa aphezulu ase-Hielscher asebenzayo e-ultrasound afakwa emhlabeni wonke ukulungiselela ama-macro-, nano- ne-microemulsions azinzile. Iphothifoliyo yomkhiqizo esukela ku-handheld encane Ultrasonic Lab Amadivayisi kuya high-power industrial industrial ultrasonic ukukhiqizwa kwezohwebo kwemifudlana emikhulu ye-emulsions, i-Hielscher Ultrasonics ikunikeza i-ultrasonicator efanelekayo yenqubo yakho.
Ukufakelwa kwamandla, ukulinganisa (ukuhamba endaweni ye-sonotrode), izinga lokushisa, kanye nokugeleza kwezinga kungashintshwa nezidingo zokwakheka kwakho. Amaphrosesa ethu e-industrial ultrasonic angathumela ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala.
Ukulawulwa okuqondile kwamapharamitha we-sonication nokuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo ekhadini le-SD-khadi elakhelwe kuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yokucubungula kuvunyelwe nenqubo yokumiswa. Zonke izinhloli zethu ze-ultrasonic zenzelwe ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele. Ukuqina, ukulungiswa okuphansi kanye nobungani bomsebenzisi kuyizinzuzo ezengeziwe ze-Hielscher's ultrasonicators, okubenza babe umsebenzi wakho-webhizinisi ekukhiqizeni.
Izesekeli ezifana ne-Hielscher ezihlukile MultiPhaseCavitator, i-flow cell ins insert eyenza isigaba sesibili nge-cannulas ngqo kwi-hot-spot indawo (bheka isithombe esingakwesokunxele), usizo lokusetha uhlelo oluhle lwe-ultrasonic emulsification.
UCampelo, uPedro Henrique; Junqueira, Luciana Affonso; de Resende, Jaime Vilela; Domingues Zacarias, Rosana; de Barros Fernandes, Regiane Victória; I-Alvarenga Botrel, i-Diego; Vilela Borges, Soraia (2017): Ukuzinza kwe-lime emulsion yamafutha ebalulekile okulungiselelwe ngokusebenzisa ama-biopolymers kanye nokwelashwa kwe-ultrasound. I-International Journal of Food Properties Vol.20, No.S1, 2017. 564-579.
Maphosa, Yvonne; I-Jideani, u-Victoria A. (2018): Izinto ezithinta ukuzinza kwe-Emulsions eziqiniswe yi-Biopolymers. Ku: Isayensi Nezobuchwepheshe Ngezindlela Zokuguqula Izifo (Ehlelwe nguSelcan Karakuş). 2018
Ama-biopolymers njenge-Emulsion Stabilizers
Izimo eziqinile nezixhumene ne-surfactants ziyadingeka kakhulu emulsions ukuze zizinze isikhathi eside. Ama-biopolymers afana ne-polysaccharides nama-proteine asetshenziswa kabanzi njengezithako ezisebenzayo emulsion systems. I-biopolymers yindlela engokwemvelo ye-ejenti e-emulsifying, ehlinzeka nge-emulsion enhle yokuqiniswa ukusebenza ngenxa yokukwazi ukugaya nokukhipha amandla. Kusukela ukukhiqizwa kwe-emulsions ezinzile kuyimfuneko yokwenza i-encapsulation ephumelelayo nge-dry-drying yemikhiqizo yokudla, ama-biopolymers uhlobo oluthile lokusimama. Ama-biopolymers angaqashwa njengama-stabilizers eyedwa noma enhlanganisela.
Ama-biopolymers afana ne-gum arabic kanye nama-whey protein isolate (WPI) ayabizi futhi angenziwa kalula ekukhiqizeni ukudla. I-Gum arabic ingumxube we-anionic carbohydrate kanye namanye amaprotheni. Amaprotheni alo ama-branched kakhulu, ahlobene eduze nesakhiwo se-polysaccharide, anika izakhiwo ezinhle ze-gum arabic. I-protein yamagciwane ehlukaniswe yenziwa ngxube yama-protective globular. Lawo maprotheni angama-globular angasheshiswa ngokushesha kwi-droplets amafutha ngesikhathi se-homogenization, okusiza ekwakheni amaconsi amancane.
Amanye ama-biopolymers avamile asetshenziswa njengama-emulsifying agents yi-gelatin, i-xanthan gum, isitashi, i-casein, i-pectin, i-maltodextrin, i-ovalbumin, i-alginate ye-sodium, ne-carboxymethylcellulose phakathi kwezinye.
I-biopolymer complexes iqukethe ama-biopolymers amabili noma ngaphezulu. I-biopolymer complexes ingahle yenziwe ngamakhemikhali, ukwelashwa kwe-enzymatic noma okushisa. Lokhu kunzima kakhulu kwandisa ukuqina nokuzinza kwe-biopolymer yokugcina eyinkimbinkimbi, kuthuthukise ukusetshenziswa kwazo nokuzinza. Ngokuyinhloko ukusimama okuphakeme okuholela ekushiseni okushintshashintshayo, amandla e-pH namandla we-ionic yizinto ezibalulekile zezinqubo ze-emulsification.